Somaliland Guardian: AYAAMAHA BARAKEYSAN IYO CIMRADII XARAMKA-2
Taas waxa ii raacay maqalka meel kasta ood joogto aad tashuush la'an u maqlayso si isku mid ah. Waxa lagu qiyaasaa sameecadaha (speakers) ilaa 6000 haddana mid tashuush ah amba dhawaaq kala duwan ma jirto. Waa farsomo sare oo si habsami ah loo dhigey loogana shaqeeyo si joogta ah 24/7 . Bal taas barbar dhig Tviyada Soomalida een barnaamajba kan kale aanu la dhawaaq ahayn ee midna dhehgaha kaa qaadaayo midna aadan maqlayn. Xaramku waxuu leeyahay wershad laydh oo u gaar ah iyo mid keyd ah. Waxay Sameecad waliba leedahay beetari u gaar ah iyo mid keyd ah. Waa farsamo aan adduunka meel kale la wadaagin. Waxa la raaciyaa inuu soo labeeyo masjidka nabiga ee Madina oo isagu leh 3000 sameecadood. Wax labadooda u dhow addunka laguma hayo. Waana mid wax badan ay ka qoreen Injiineerada dhinaca codka ee adduunku. (Sound Engineers)
Waxa Eedaanka u xil saran qoysas ka soo jeeda reero magac leh oo kala ah Mulla, Shaker, Rayes, Al al-Abbas, Hadrawi, Basnawi, Khouj, Marouf and Feedah. Qoysaskani qaarbaa boqolaal sano hayey hawshan sida Al-abas oo ka soo jeeda 'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib, nabiga adeerkii.
Tiro ahaan waa 16 Mu'adin Ramadaanta waxa lagu kordhiyaa 6 kale.
Posted by Ahmed Hassan Arwo at 4:22 AM